Kaontinanta fahafito - 1aviagem.com
Lahatsoratra taloha: Torohevitra momba izay tokony hatao any Barcelona
Lahatsoratra manaraka: Ny kaontinanta fahavalo
Posted 18 Aogositra 2019 ny Rômulo Lucena
Ahoana raha lazaiko aminao fa ny tenantsika (olombelona) ny tany dia nahazo kaontinanta fahafito?
Eny, tsara ny vaovao, saingy indrisy fa tsy izany.
Noho ny fako natambatra amoron-dranomasina entin'ny ranomasimbe ny ranomasina ary mifarana amin'ny faritry ny Ranomasimbe Pasifika eo anelanelan'i California sy Hawaii, ny sasany amin'ireo Oceanographers dia nanasokajy azy ho kaontinanta fahafito. Io dia mety ho antonony arofanina, izay arahinay, plastika ny ankamaroany. Tsiahivina fa manodidina ny 79 arivo taonina dia 94% no vita amin'ny plastika na plastika micro. Fantaro ny plastika micro-plastika misy sela kely kely ka sarotra ny esorina amin'ny ranomasina. Miresaka sombi-baravarana, vilany, ary fitaovana hafa isika rehefa tapaka, amin'ny onjan-dranomasina, na onjan-dranomasina, na any amin'ny faritra sasany dia simba any akaikin'ny 5 milimetatra. Toa an'io sary io.
(Sary avy amin'ny Florida Sea Grant)
Ary mijanona ao anaty ranomasina io fitaovana io ary miangona mandra-paha-mamorona ny antsoin'ny mpikaroka sasany hoe "kontinenta vaovao." Marina izany, kaontinanta plastika. Io no iantsoako ny kaontinanta fahafito. ” Ka anio ankoatra ny: Afrika, Amerika, Antartika, Azia, Eropa ary Oseania, manana plastika ihany koa isika!
Inona no mamorona ny kaontinanta vaovao?
Ny fitaovana tena hita dia nampifamatotra ny kofehy nylon, avy amin'ny fitaovana fanjonoana sy akanjo, ary ireo fitaovana hafa dia miaraka aminy. Ny fitaovana dia ahitana ohatra ny tavoahangy isan-karazany, avy amin'ny biby fiompy sy ny tavoahangy fitaratra, tavoahangy plastika isan-karazany ary ny lamban'izy ireo. Mifohaza ry zareo any amin'ny Ranomasimbe Pasifika. Eo anelanelan'i Etazonia (Kalifornia) sy Hawaii
Eny, mety nahita sary vitsivitsy momba ny fiainana an-dranomasina namboarina na simba tamin'ny plastika ianao. Maty ny sokatra satria misavoritaka rano velona amin'ny kitapo plastika ary mihinana sy maty satria tsy afa-manafoana ilay plastika izy io ary miafara ilay sokatra. Eny, indrisy fa mitranga izany.
Ary alohan'ny fiheveranao fa ampy tsara ny sokatra mba hangaroana plastika amin'ny rano velona, ​​andramo izany. mahita rano velona, ​​karazan-dàlana avy amin'ny ranomasina, izay efa manana rano feno rahona ary manjary fahitana, ary mahita rano velona, ​​na kojakoja ao anaty fepetra mitovy. Sa raha mahita ny tsy fitovizany?
Misy olona izay tsy hainy ny manavaka voankazo plastika haingon-doko amin'ny tena voankazo.
(Koa iza amin'ireo sary roa etsy ambony ireo dia voankazo plastika ary iza no tena vokatra?) Avelao amin'ny hevitra (sary 1 na sary 2).
Ary izao, azonao tsara ve fa ny sokatra dia tsy adala?
Antsoy hoe nosy plastika na kaontinanta fahafito ny zava-misy fa ny olana no misy ary mila mifehy. Rehefa dinihina tokoa, raha ny biby dia mihinana plastika ary tsy manimba eo amin'ny rojo sakafo, manombantombana hoe aiza no hifantohany amin'ny anao na amin'ny kiboko. Rehefa dinihina tokoa, dia izahay no tampony amin'ny rojo sakafo. Ary izahay dia mamono biby, anisan'izany ny biby an-dranomasina.
Hatraiza ny halehiben'ny olana?
Ny fikarohana vaovao dia mampiseho fa ilay antsoina hoe "kaontinanta fahafito" dia efa ho roa na intelo ny faritry France, na ny fanjakan'i Minas Gerais (ho an'ny namako breziliana). Zavatra manodidina ny 1,6 tapitrisa kilometatra toradroa, ary tsy mitsaha-mitombo izany.
Ny anarana ofisialy amin'ity kofehy plastika ity dia: Faritra lehibe amin'ny fako Pasifika.
Inona no sarotra hita raha jerena ny plastika micro (5 mm tadidio?)
Ka raha miverimberina ianao, atsipazo ny rano tavoahangy sy zavatra plastika hafa amin'ny toerana mety fa tsy eny amoron-dranomasina, na farafaharatsiny nomenao toerana sahaza azy io. Ny fanaovana izany dia hanampy amin'ny famonjena an-dranomasina.
Tsarovy ny tenin'i Joana Bicalho:
"Tsy milalao any ivelany velively ianao, milalao ao anatiny fotsiny!"
Ry malalako, tsy mbola milalao any ivelany ianao (Planet) izay vao nilalao tao anatiny ihany.
Arotsaky ny fankasitrahana aho dia mametraka sokatra ho anao mba ho tonga saina. Misaotra anao noho ny fihetsikao tsy mba hanary (na amin'ny lafiny rehetra) any amin'ny ranomasina) ny plastika, fa ny fampiasa indray, ny recycle na ny sambo mankany amin'ny toerana marina.
Turtle Shot any Malaizia.
Eny ary, amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka momba ny kaontinanta fahavalo aho, ary manakaiky anao kokoa noho ny eritreritrao!
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fitsidihana ny fiainana an-dranomasina:
https://1aviagem.com/e-sobre-malasia-inona-do-tiantsika lazaina /
Ary tadiavo ny ampahany amin'ny ranomasina.
Raha hamaky bebe kokoa momba izany dia mamela rohy roa aho:
1- by National Geografic
https://www.nationalgeographic.com/news/2018 / 03 / lehibe-pacific-fako-patch-plastics-environment / #akaiky
2- avy amin'ny Daily Telegraph.
https://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/northern-torapasika / avaratra-tora-filan-kevitra-to-handinika-plastic-kit-ban-manerana-ny-peninsula /tantara vaovao /5dcabe2f20d33b1e1104dea4a080daea
Famihinaana ary mandra-pahatongan'ny lahatsoratra manaraka.
#kitty #domingou #caixadepapelao Ny zavatra tsara momba ny fahatsorana dia ny fifaliany kely amin'itony. Ny #box dia mety ho toeram-piafenana lehibe. Toy ny kilalao vaovao. #Cat + boaty baoritra dia mitovy amin'ny #success. Miaraha mifaly amin'ilay kely dia afaka mifaly miaraka amin'ny maro. #kittens #playing #around #enjoyyourweekend #sunday